Egaa, akkuma walaloon uummataa kun isin gorsetti farsoo garbuu Meettaa erga haleelttanii, xiqqooshii deemtanii booda magaalattii Barooddoo(7) – dhaqqabdu. Amma karaa kanaan daangaa Bachoo fi Ada’a Bargaa cinaa jirtu. Gooroo isa gara kaabaa jirutu biyya Oromoo Ada’a Bargaa-ti. Ada’a Bargaatti karaa kaabatiin aanee Ada’a Waayyuu-tu jira. Inni karaa kaabatiin Laga Abbayyaa tuqa. Booda magaalatti Barooddoo irraa kaatanii otoo magaalaa Giincii hin gayin jidduu lamaan isaaniitti daangaa Oromoo Tuulamaa fi Oromoo Maccaa irra tarkaanfattu. Biyyi Oromoo fi dhiigni Oromoo tokkumaa biizaan waan isin barbaachisu isinitti hin fakkaatini. Kunoo, Biyyi Oromoo inni Oromoon Maccaa irra qubate bakka amma jirtan kana irraa ka’eeti: Giincii, Ambo, Naqamte, Gimbii fi Beegii irraan qaariyee Sudaan Kibbaatti ijjata. Dabaleesoo, biyyi Oromoo Maccaa kunWambaraa isa Goojjam keessaa irraa ka’eeti: Horroo Guduruu, Jimma Raaree, Jimma Tibbee, Daannoo, Limmuu fi Jimma Abbaa Jifaarirraan tarkaanfatee Laga Shabbee irratti daangaa uummata Kafichootti ijjata. Inni karaa baldhina lafaatiin xiqqoo-shii Biyya Amaaraa ni caala. Biyyi Oromoo Tuulamaas as irraa ka’ee: Olonkomii, Shaggar, Bishooftuu fi Adaamaa faa irraan dabree naannoo magaalaa Walancittii-tti biyya Oromoo Karrayyuutti ijjata.
Mee otoo isin Giincii irraa hin fagaatinan waa itti isiniif dabala. Ani gaafa biraa dhaqxu jedheetan malee, waayee Jalduu fi Gindabaratirraanfaddheetii miti. Akkamittan Jaldu keessanii fi Gindabarat keessan kan nama isaa dhiisitii lafti isaatuu jagna tahe irraanfaddha? Karaankonkolaataa Giincii irraa ka’uun Cillimo keessa kutee, magaalattii Shugguxee (9) – yookaan Jaldu jedhamtu keessa bayee wiirtuu Gindabarat, magaalattii Kaachisii (10) – kaatee seena. Ammaan tana namni Oromoos, lafti Oromoos akka durii miti. Akkuma Oromoon bara Minilik irraa kaasee: “erga Sidaamni biyya keenya seenee asiiyyi biyyi bade. Erga Sidaamni biyya dhufee, kormi gorba koruu dide. Bakki miilli Sidaamaa irraijjate midhaan hin baasuu, midhaan sirriitti marguu didee beelli biyya seene.” Maqaan Jaldu jedhamu kun Biyya Oromoo jiidhaa, Waaqni Oromoo jiisee kenneef san kan nutti himu. Maqaan “Jaldu“-u kun jecha Afaan Oromoo isa “jaldeessa” jedhamu wajjin wal-simata. Dabalees duumessi akka malee gurraachawee roobuuf aggaamu, inni samii fi dachee dukkaneessu sun “jaldoo” jedhama. Lachuu bifa akka jaldeessaa gurraachawu ibisu. Oromoof duumessi akkanaa kun, bokkaan roobee biyya gabbisu kun milkii akkaan gaarii tahe. Dur otoo miilli nafxanyaa Jaldu seenee biyyeeOromoo irra hin ijjatin, Jaldu kun marga lalisaa fi bosonaan kan jifaarame, biyya rooba fi bosonaan akka jaldeessaatti gurraachawe ture. Oromoon Oromiyaa Waltajjii kun: “Sidaamni bulguu muka nyaatu” jedha. Ammas “Bulguun mukaa” yoo iluufii baateyyuu: Manjii, Gondorii fi Tigraay hin fakkaannee, Jaldu daggalaa fi caakkaa ni qaba.
Amma Giincii irraa kaatanii erga xiqqoo deemtanii booda magaalattii bicuu takka, tan Asgorii yookaan Asgorii Abeebee (11) – jedhamtuu geessu. Gara kibbaa yoo ilaaltan tulluuwwan lakkuu argitu. Tulluu Boddaa fi naannoo Boddaa biyya dhaloota Looreet Xaggayee jechaa dha. MagaalattiinBoddaa (12) – Giinchii irraa wantee 21 faaggatte jirti. Gooroon waan isinitti jigu fakkaatu sun immoo Gooroo Dandii isa kutaa duraa irratti isiniif tuqame sana. Gooroo kanatu isin dhoowwe malee, silaa Hara Dandii kan Oromoon “mundhii shooxee dubara Oromoo fakkaata” jedhuun, kan mundhii lakkoofsa saddeetii fakkaatu, kan asitti Dambal Dandii jedhamuu agartuuyyu. Naannoon lamaanuu: Boddaa fi Dandi biyya Afran Walisoo keessaa isaan gara kaabaa jirani. Gooroo Dandii fi gooroo isa karaa fuula Goojjamiin isinitti muldhutu kanaa, jechuun Gooroo Ilfataa jidduu naannoon jiru kun naannoo faarfamaa, biyya jagnoota hedduu kan Abeebe jedhamu. Akkuma naannoon Jalduu biyya dhaloota goota Oromoo, kan Koloneel Alamuu Qixxeessaa tahee san, Abeebes biyya dhaloota gootichaa, biyya Zoogaa Boojiyaa-ti.